दुर्इ चलचित्र प्रदर्शनीले विल्सन विक्रम हैरान - ConfuseNepal
दुर्इ चलचित्र प्रदर्शनीले विल्सन विक्रम हैरान
२९ भाद्र २०७५, शुक्रबार २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार कन्फ्युजनेपाल0Comments wilson bikram rai
कहिले वर्षमा एउटा पनि चलचित्र नआएर तनाब, कहिले हप्तैपिच्छे लागेर हैरान ! अहिले हास्यकलाकार विल्सन विक्रम राईलार्इ याे कुराले हैरान बनाएकाे छ । लामो समय पर्दामा नदेखिएका उनको यही भाद्रमा त्यो पनि हप्ताको अन्तरमा दुई चलचित्र प्रदर्शन भएका छन् ।
गत शुक्रवारबाट उनको नयाँ चलचित्र ‘साली कस्को भेनाको’ प्रदर्शनमा आएको छ । उता चलचित्र ‘रामकहानी’ ले दोस्रो सातामा प्रदर्शन सुरु गरेको छ । दुबै चलचित्रमा उनको लिड रोल छ । भूमिका पनि दुबै चलचित्रमा आकाश-जमिनको फरक छैन ।
विल्सनकै लागि हल जाने दर्शकलाई यस हप्ता ‘रामकहानी’ हेर्ने वा ‘साली कस्को भेनाकाे’ ? निर्णय लिन कठिन हुने देखिन्छ । अब दुई चलचित्रलाई एकअर्काको उपस्थिति भारी पर्ला वा नपर्ला ?, दर्शकको पहिलो रोजाई कुन बन्ला ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यस हप्ताको शुक्रवार ‘साली कस्को भेनाकाे’ बाहेक अन्य चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छैनन् । यसअघि हरेक हप्ता दुई बढी चलचित्रको भिडन्त हुँदै आएको थियो । यो हप्ता हलमा नयाँ चलचित्रको भिडभाड नदेखिनुको पछाडि गएको हप्ता आएका दुई ठूला चलचित्र हुन्, ‘रोज’ र ‘रामकहानी’ ।
दुई चलचित्रको चेपुवामा पर्ने डरले यो साता एक मात्र चलचित्रले प्रदर्शनमा उत्रने जोखिम उठाएको हो । ‘साली कस्को भेनाको’ लाई पुराना निर्माता प्रसाद श्रेष्ठले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा मगर जातीको संकृतिमा साली र भेनाको सम्बन्धलाई देखाइएको छ ।
भद्र भुजेलको निर्देशन रहेको चलचित्रमा विल्सनका अलावा सुष्मा कार्की, मरिष्का पोख्रेल, रजनी गुरुङ, देव सागरलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । गएको हप्ता प्रदर्शनमा आएका दुई ठूला चलचित्रका कारण उक्त चलचित्रले निकै कम हल पाएको छ ।
'प्रेम गीत ३' रिलीज नहुँदै 'डक्टर डेनिम'को ब्राण्ड एम्बेसडर बने मनिष
राजेश पायल राईको सयपत्रीले तिहार गीत चर्चाको शिखरमा
← सर्वत्र रामकहानी
चलचित्र सायाबुङ (शिरफुल) को विशेष प्रदर्शन हुने →
धरानमा सर्वदलीय बैठकले यस्ताे निर्णय गर्याे, एम्बु…